Doorashadii Aqalka sare 2aad oo ka dhacaysa beydhabo. - Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Doorashadii Aqalka sare 2aad oo ka dhacaysa beydhabo.
Doorashadii Aqalka sare 2aad oo ka dhacaysa beydhabo.
Magaalada Baydhabo ee Caasimadda kumeerka u ah Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa Maanta oo Axad ah lagu wadaa inay ka dhacdo doorashada kuraas ka harsaneyd Senatorada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka.
Lix Musharax ayaa ku tartamaya saddex kursi oo kamid ah 8-da kursi ee Aqalka Sare ee laga soo doorto Koonfur Galbeed, waxaana dadka Musharaxiinta tartameysa kamid ah Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda xilgaarsiinta Xasan Xuseen Xaaji.
Doorashada Maanta ka dhaceysa Baydhabo ayaa waxaa kursigeeda Xildhibaan ee Golaha Shacabka ku weyneysa Wasiirada Haweenka Xukuumadda Xaniifa Maxamed Ibraahin Xaabsade, kadib markii Lafta-gareen uu Liiska Musharaxiinta ka saaray, kuna soo bedelay Nin la dhashay.
Xildhibaanada Baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa dooran doona kuraasta harsan ee doorashada Aqalka Sare, waxaana haatan howlka Baarlamaanka Maamulkaas ka ka socota qaban-qabadii ugu dambeysay ee doorashada dhaceysa.
Previous articleMacalin Dugsi Qur’aan oo lagu dilay duleedka Magaalada Gaalkacyo
Next articleUrurka Daaliban oo la wareegey gobolo waaweyn.